Uyibetha njani ingcinezelo ngokwebhayibhile Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ungalunqoba njani uxinzelelo ngokwebhayibhile. Into yokuqala yokuyiqonda ngoxinzelelo kukuba ukuphazamiseka ngokweemvakalelo echaphazela iimvakalelo zethu ukuswela isibindi kunye nosizi oluqhubekayo. Ukuhamba ngoxinzelelo kunokuba yimeko enzima kakhulu ebomini. Ke ngoko, ukuba uyahamba, kuya kufuneka uyazi loo nto ngoncedo lukaThixo kunye nonyango lobungcali, kunokwenzeka ukuba uphume womelele.
Ngaphandle kokuya phambili, eyakho Ibhayibhile ibalisa ibali labalinganiswa abaliqela ababedandathekile. Kodwa UThixo wabanceda yelo lizwe. Ezi zithembiso zine zivela kuThixo zinokukunceda woyise uxinzelelo:
1 Ungalubetha njani uxinzelelo ngokwebhayibhile kumanqanaba ama-4
1.1 1. Auwedwa
1.2 2. UThixo uya kukuthuthuzela
1.3 3. Uvuyo luya kubuya
1.4 4. Unekamva
Ungalubetha njani uxinzelelo ngokwebhayibhile kumanqanaba ama-4
Yoyisa uxinzelelo ngokwebhayibhile
Kwanawona maxesha abuhlungu, xa uziva ulilolo, UThixo unawe. Akukho nto inokusahlukanisa nothando lukaThixo. Ukuba noxinzelelo akuthethi ukuba uThixo ukushiyile. Kwimizuzu yonke yobomi uThixo usecaleni lakho ukukunceda.
"UThixo ngokwakhe wathi:" Andiyi kukushiya, andiyi kukushiya «.
Endiqinisekileyo ukuba akukho ukufanabomi, nazingelosi, nazilawuli, nanto ikhoyo, nazinto zizayo,
nabude, nobunzulu, nayo nayiphi na into edaliweyo ayinako ukwahlula eluthandweni lukaThixo, olukuye uKristu Yesu, iNkosi yethu.
KwabaseRoma 8: 38-39
2. UThixo uya kukuthuthuzela
UThixo nguThixo wothando kwaye uzokuthuthuzela. UYesu waphila emhlabeni njengomntu kwaye naye waziva elusizi. Uyayiqonda indlela oziva ngayo. Ungamthemba uThixo, akazukukwenzakalisa. UThixo uza kukuphilisa kwaye akunike intuthuzelo oyifunayo.
"Banoyolo abakhedamileyo; ngokuba baya konwatyiswa bona".
Ngesi sizathu kuye kwafuneka ukuba afane nabantakwabo kwinto yonke, ukuze abe ngumbingeleli omkhulu onenceba nothembekileyo ngokubhekisele kuThixo, ocamagushela izono zabantu.
Hebhere 2: 17-18
3. Uvuyo luya kubuya
Usizi aluhlali ngonaphakade. Ingabonakala ngathi ayizukuphela, kodwa iyakuphela! UThixo uthembisa ukuba uya kuthanda! Usizi lwakho luya kujika lube luvuyo. Kholwa kwaye ulinde ngomonde uvuyo lukaThixo.
“Abo bahlwayelayo beneenyembezi, bememelela bevuya, baya kuvuna. Lowo uphuma ekhala xa ehlwayela imbewu, uya kubuya neengoma zovuyo, ezisa izithungu zakhe ”.
Ndumiso 126: 5-6
Isililo sam usenze sangqungqa;
Ukhulule amarhonya am, wandibhinqisa uvuyo.
I-Psalm 30: 11
Kukho ithemba ngawe! UThixo unezicwangciso ezilungileyo ngawe. Xa ungalifumani ithemba ngekamva, themba uThixo. Ikamva lakho lisezandleni zikaThixo kwaye izicwangciso zakhe ngawe zintle kakhulu. Abantu bakwaSirayeli nabo ababoni ndlela yakuphuma, kodwa uThixo wabavulela uLwandle Olubomvu! UThixo uyakwenza ummangaliso kwaye abuguqule ubomi bakho.
"Kungokuba mna ndizazi izicwangciso endinazo ngani, itsho iNkosi," ndiceba ukuchuma, ndinganilimazi, ndicinga ukuninika ithemba nekamva.
Kwaye siyazi ukuba zonke izinto zisebenzisana ngokulungileyo kwabo bathanda uThixo, oko kukuthi, abo babiziweyo ngokwenjongo yakhe.
AmaRoma 8: 28
UMoya weNkosi uYehova uphezu kwam; ngokuba uYehova undithambisele ukushumayeza iindaba ezilungileyo kwabangamahlwempu. Undithumele ukukhathalela abantliziyo zaphukileyo, uku Bhengeza inkululeko kwabathinjiweyo nokukhululwa kubabanjwa ebumnyameni. ukubhengeza unyaka wokulunga kweNkosi, nomhla wempindezelo yoThixo wethu; Ukuthuthuzela bonke abasentlungwini, ndibanike bonke abalilayo eZiyon isithsaba esihle esikhundleni sothuthu, ioli yovuyo endaweni yokulila y Ingubo yendumiso endaweni yomoya othobekileyo. Ukubizwa kwabo kuthiwe yimiterebhinti yobulungisa, isityalo sikaYehova. ekuboniseni ubuqaqawuli bakhe.
UIsaya 61: 1-3
Khumbula ukuba uThixo uya kuhlala ecaleni kwakho. Nangona kunjalo, inyathelo lokuqala lokuphuma kuxinzelelo kufuneka lithathwe nguwe. Ingcebiso nganye esiyinike yona ayinaxabiso ukuba ubambelele ekukholelweni ukuba awuzokwazi ukuphuma kumngxunya weemvakalelo ozifumana ukuwo. Ke ngoko, sicebisa ukuba ucele uncedo kubuchwephesha. Ngoncedo lukaThixo, intando yakho iya kwenza konke okuseleyo.
Kube njalo! Siyathemba ukuba uyazi ngoku indlela yokoyisa uxinzelelo ngokwebhayibhile. UKUBA unomdla wokwazi kutheni kubalulekile ukuya ecaweni ukuba ngumKristu, qhubeka ubrawuza Fumanisa kwi-intanethi.